We She Me: ရေသည် လင်မယား
Su - 9/10/09, 2:02 PM
thanks ko andy. feeling all warm and fuzzy after reading this.
please give my best regards to your family. :)
sawphonelu - 9/10/09, 2:07 PM
တို့ မျိုး ဆက် က တော်တော် များ များ ဒီ လို ချည်းပါ ပဲ ။ ငယ် ငယ် က တော့ မဆလ ခေတ် ဆိုတော့ ၊ ပိုက်ဆံ ရှိ လည်း သုံး စရာ ပစ္စည်း မရှိ ။ ၉၂ လောက် က နေ ပြီး တော့ ၉၆ လောက် က တော့ နည်းနည်း ပြေ လည် တယ် ပြော ရ မယ် ။ ငါတို့ ကျောင်း ပြီးတဲ့ ၂၀၀၁ လောက် က တော့ ဘဝ မှာ အစုတ်ပြတ် ဆုံး လို့ ပြော ရ မယ် ။ အဲဒီတုန်း က လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ရှေ့ ဖြတ် အလျှောက် အိပ် ကပ် ထဲ လက် ဖက် ရည် တစ် ခွက် ဖိုး မရှိ လို့ မျက် ရည် ဝိုင်း ခဲ့ ဖူး တယ် ။
အင်း အခုတော့ ---------။
စန္ဒကူးမေ - 9/10/09, 2:31 PM
ကူးကူးတို့ငယ်တုန်းကလဲအဲလိုဘဲ...tv တစ်ရပ်ကွက်လုံးမှ ၁ လုံးရှိတာ.. ဆောက်လုပ်ရေး အရာရှိအိမ်မှာ သွားကြည့်ရတာ..
အဲဒါတောင် အမေခိုင်းတာလုပ်ပေးပီးမှ.. သွားလို့ရတယ်..
အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေပေါ့..ငယ်ဘ၀ကတော့ဒီလိုပဲ.. အခုလဲမချမ်းသာ ပါဘူး.ဒါပေမယ့် အကိုရေးသလိုပြန်တွေးရင် ရင်ထဲနွေးမိပါတယ်.. ကျေးဇူးပဲအကိုရေ..ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပီး..
စိတ်ထဲကြည်နူးမိလို့.... ပိုစ့်တစ်ခု..ခံစားမှုတစ်ခု ထည့်ပေးတယ်..
rose of sharon - 9/10/09, 2:44 PM
ဟုတ်ပနော်.... ဘဝခရီးဖော်နဲ့ ငယ်ဘဝတွေကို ပြန်ပြောပြ ရတာ ပျော်စရာကြီးနော်.... ပိုရင်းနှီးလာချိန်မှ အားလုံးထုတ်ပြောဖြစ်ကြတာပါဘဲ
Vista - 9/10/09, 2:47 PM
ကိုဇေယျာ - 9/10/09, 4:23 PM
အစ်ကို့စာ တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် ဖတ်ရ အတော်တန်တာဗျ။
TV ဆိုလို့ လေးတန်းနှစ်မှာ တရုတ်ကက်ဆက်လေးဝယ်တော့ အိမ်မှာ မီးမလာဘူး။ ၇ တန်းနှစ် TV ၀ယ်တော့ အိမ်မှာ မီးမလာဘူး။ ပထမနှစ်ကွန်ပူတာ ၀ယ်တော့ အိမ်မှာ မီးမလာဘူး။ ပစ္စည်းတွေရှေ့က မခွာပဲ မီးလုံးကို ထိုင်ကြည့်နေတာ မှတ်မိနေတယ်။ (မီးမလာတာ ခုချိန်မှာ ဘာမှ မထူးဆန်းတော့ပေမယ့် အရင်ကတော့ ဆန်းတယ်ဗျ :D)
မီယာ - 9/10/09, 5:35 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေ ပြန်သတိရပြီး ၀မ်းနဲလိုက်တာ... tv သွားကြည့်ဖို့ အဝေးကြီး လမ်းလျှောက်ရတယ်။
Nge Naing - 9/10/09, 6:03 PM
ကျွန်မတို့ကတော့ ကျွန်မငယ်ငယ်က အကြောင်း မေးစရာကိုမလိုဘူး အကုန်ပြောပြခဲ့တယ်။ အခုလို ပြောပြထားခဲ့တော့ ကိုအန်ဒီတို့လို အခုချိန်မှာ ပြန်ပြောစရာ သိပ်မရှိဖြစ်သွားတယ်။ အရင်က မပြောဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းသား။
Anonymous - 9/10/09, 6:24 PM
လူတွေအများကြီးနော်..ဘ၀မမေ့တဲ့သူ၊ ကြိုးစားရုန်းထွက်နိုင်သူတွေပေါ့။ကိုယ့်မှာ အဆန်တော်တော်လေးချောင်တဲ့ သားတယောက်ရှိတယ်။ သူက မိဘမချောင်လည်ခဲ့တာဆိုလူသိမှာ
သိပ်စိုးသဗျ။ အလွန်စကားပြောသလောက် အလုပ်မတွင်သူ၊ အပေါ်ယံရွှေမှုံကြဲ အလှကို သိပ်မက်မော သူပေါ့။ ဟန်တလုံးပန်တလုံး အလွန်လုပ်သူဆိုပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော့မှာ တသက်လုံး ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ဖောက်ထွက်ခဲ့ရသူဆိုတော့ အဆန်ချောင် အောက်ခြေလွတ်သူတွေ့ရင်အင်မတန်ခါးသီးတာ။ သူနဲ့ကြမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိ်ုင်ဗျာ။ ခက်တာက မိဘပြောတော့လဲသူနားမ၀င်ဖူးဗျ၊
တခြားကလေးတွေက သူ့လိုမဟုတ်ဖူး။ သူတယောက်ထဲဖြစ်နေတာ။ဆိုးသလားဆို
တော့လဲ မဆိုးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီဟန်ကြီးပန်ကြီး
နဲ့ အလုပ်ကိုခါးချိုးမလုပ်ချင်တာကို ကျွန်တော်
ချော့ပြောတော့လဲနားမ၀င်။ ကျွန်တော် အလုပ်
မွေးထားမိလို့သာ။ sorry ဗျာ ကိုအန်ဒီ၊ ခင်ဗျားပိုစ့်တွေ ဖတ်ဖတ်ပြီးသဘောကျနေတာ။
မဆီမဆိုင် ခင်ဗျားအတွက်ရေးတဲ့ ကွန်မင့်မှာ
ကျွန်တော်လာပေါက်ကွဲသွားတယ်။ ခင်ဗျားပိုစ့်တွေ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုအမြဲလာ
ဖတ်တယ်။ ကျွန်တော့်သား အဆန်ချောင်က
khin oo may - 9/10/09, 6:47 PM
MANORHARY - 9/10/09, 9:20 PM
ဘဝမတူဘယ်ရှိပါ့မလဲနော် ၁၀၀ မှာ ၈၀% တော့တူကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် - 9/10/09, 9:38 PM
Nai - 9/10/09, 11:16 PM
မဆလ ခေတ် မှာ လူဖြစ် ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အတူတူ
ခုမှ ကျွန်တော်တိူ့ကံ အကြောင်းသင့် လို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာအရပ်မှာ
Rita - 9/10/09, 11:44 PM
post တခုဆို ဆိုသလောက်ပါ။
JuneOne - 9/11/09, 1:04 AM
ဆံထုံးတော်ကြီး တမာသီးနှင့် စာသားကိုသွားသတိရတယ်။
ငယ်ငယ် က TV ကိုတော်တော် အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ(၉တန်း)အထိမကြည့်ဖူးဘူး။
Nu Thwe - 9/11/09, 6:17 AM
လွမ်းစရာလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးစင်းစင်း ရေးသွားတာ သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ငယ်ငယ်တုံးက အကြောင်းတွေကို ဒီလို သူတလှည့် ကိုယ်တလှည့် ပြောနိုင်တယ် ဆိုတာကိုက တယောက်နဲ့ တယောက် ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည် ရင်းနှီး သံယောဇဉ်ရှိ ခိုင်မြဲတယ် ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ အားကျစရာကြီး။
မရှိခဲ့တာတွေကို သတိရခြင်းဟာ ရှိနေသမျှလေးအပေါ် ပိုတန်ဖိုးထားစိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အတိတ်ကို သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
KhunTunOo - 9/11/09, 11:57 AM
စနစ်တစ်ခု ဘဝတစ်ခုကို ထင်ဟပ်အောင် ရေးပြထားတဲ့ အကို့လက်ရာကို အရမ်း လေးစားမိပါတယ်။
Nai ပြောသလို ခုမှကျနော်တို့ကံ အကြောင်းသင့် လို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာအရပ်မှာ
ဖေါဖေါသီသီစားသောက်နေထိုင်ကြရတာပါ ဆိုတာ တွေးမိတော့၊ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်ဟိုစဉ်က ကြုံခဲ့ရသလို ခုထိ ကြုံနေရသေးတဲ့ လူတွေ အတွက် သက်ပြင်းမောကြီးလည်း ချလိုက်မိပါတယ်။
ZT - 9/12/09, 5:50 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ Bravo Ko Andy.
tmh - 9/12/09, 11:48 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ :-)
မောင်မောင် - 9/16/09, 12:27 AM
အေးဗျာ ကိုယ့်လိုပဲ ငယ်ငယ်က တီဗီ ကို သူများအိမ်မှာသွားကြည့်ရတယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ အတိတ်ဆီပြန်ရောက်သွားတယ်။
လဖက်ရည်ဖိုး ကတော့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် လှည့်ပြီးကျခံရတယ်။
ဒီပိုစ့်လေး ကို ဖတ်ရတာ ငယ်ငယ်က ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ 
သက်ဝေ - 9/16/09, 3:14 PM
ကိုယ်တို့ ငယ်ဘဝတွေက အစိုးရဝန်ထမ်း မိဘတွေရဲ့ သားသမီးဘဝတွေမို့ ယေဘုကျအားဖြင့်တော့ တော်တော်ကို တူကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူတန်းစား ကွာဟမှုလဲ နည်းပါးတယ်။ ရတာလေးနဲ့ လောက်ငှတယ်။ မီး မှန်မှန်လာတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူတန်းစား ကွာဟမှုတွေ တော်တော်ကြီးမားနေပါပြီ။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက တအားချမ်းသာပြီး မရှိဆင်းရဲတွေကတော့ ထမင်းရည်တောင် နေ့စဉ်မန်မှန် ဝယ်သောက်စရာ ပိုက်ဆံမရှိကြဘူး လို့ ကြားရတယ်...။ မီးလဲ မှန်မှန်မလာတော့ဘူး...။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ - 9/16/09, 4:42 PM
ဖတ်ရသူ စိတ်ကြည်နှုးစရာလေးပါ။ စကတည်းကဆုံးသည်ထိ ပြုံးနေမိပါတယ်။
Ko Paw - 9/17/09, 12:59 PM
အို.... ကိုအင်ဒီကြီးကလဲ.... ကြက်ကန်းခွပ်လို့ ပွဲကျွတ်အောင် နိုင်သေးသပ၊ ကံဆိုင်လို့တကယ်၊ ချက်ကောင်းကိုတွယ်မိလျှင်၊ ရေသည်မောင်မောင် လူနေလှလို့၊ ရွှေချသလိုပြောင်ရော့မယ်။
Andy Myint - 9/17/09, 8:19 PM
ကိုပေါ ပြောသလို ကြက်ကန်းခွပ်ပြီး ထီများပေါက်ခဲ့ရင် ကိုပေါကို ဘီယာ အ၀တိုက်ဦးမှာ... စိုက်ခင်းတစ်ခုလည်း ၀ယ်ပေးဦးမှာ...
Moe Cho Thinn - 9/19/09, 6:37 AM
ဘ၀ကိုကျေနပ်၊ မိသားစုဘ၀ကို ကြည်နူး၊ မယ်နဲ့မောင် ဖူးစာဆုံရတာကို စိတ်ချမ်းမြေ့ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်မို့ ထင်ပါရဲ့။ အချစ်တလုံးမပါဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ထုံသင်းနေတာမို့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်တာ။
Anonymous - 9/21/09, 2:59 AM
Don't bull shit man, you think you knowalot?
Your english is dam poor, pls improve it.
I know very well how you get there. you want me to write here?
you know what you are, fuck man
Andy Myint - 9/21/09, 9:36 AM
Are you blackmailing me? Be mature and positive, Reader. Never have I claimed that I have excellent English skill. There is nothing wrong with how I have got here. I have confidence in every piece of it. If you have personal issue, you can drop me email at andmyint@gmail.com. I will make it clear.
Andy Myint - 9/21/09, 11:06 PM
ကဲ ... ဒီကို ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်လူက သိနေမှတော့ လာ ရေးကွာ။ ကိုယ့်လူပြောတဲ့ ပုံက ငါကပဲ ဒီကို အောက်တန်းကျကျ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် မဟုတ်တာ လုပ်ပြီး ရောက်လာသလိုနဲ့ တခြား သူတွေ ယုန်ထင် ကြောင်ထင် ဖြစ်တော့မယ်။ ရှင်းပြနေရင် မထူးဘူး။ သိပ်သိနေမှတော့ လာရေးကွာ။
NL - 9/22/09, 7:02 PM
to Anonymous son of bitch - 9/21/09 2:59 AM ,
Readers can see your jealous and dirty mind easily. your comment show your low standard.
U DAMN POOR,
not dam poor...ha ha
nyimuyar - 9/26/09, 3:03 AM
how is the Sydney Red Dust brother?
jasmine - 9/27/09, 4:03 PM
hi,ko andy ....i take already ur blog link.i always visit this blog everyday. but forget to put comment.i like ur blog.
waiting new post,
Anonymous - 9/30/09, 9:29 AM
ဒူကဘာ - 10/10/09, 8:44 PM
အင်း တီဗွီဝယ်မိလို့ အက်(စ်)ဘီက ခေါ်စစ်ခံရတာတွေ၊ Joy ဂျင်း ဆိုလို့ ဝမ်းနိုင်းတို့ ပီဂျေ ဂျင်းတွေတောင် သတိတရ ဖြစ်မိသွားသေး ကိုအန်ဒီရေ....။
sosegado တည်ငြိမ်အေး - 10/18/09, 6:27 PM
ရေးစေချင်သည်၊ ‘အောဆီ တရားစီရင်ရေး’ စလုံးစစ်သားတယောက် အခန်းဖေါ်တွေကို သတ်တာ စစ်ဆေးတာ တရားရုံး တခုခု မှားနေသလားလို့ ။
shwe - 10/27/09, 11:58 PM
ကိုအန်ဒီရေ သားသား ကိုထူး ငိုနေတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော်တော်လေးရီလိုက်ရတယ် မအားလို့ပိုစ့်အသစ်မတင်ရင်တောင် ကလေးဗွီဒီယိုလေးတွေတင် ပါလား ကြည့်ချင်လို့
shwe - 10/28/09, 12:08 AM
neking - 11/12/09, 1:37 PM
အကိုရေ...စာလာဖတ်တာပါ...အသစ်တွေရေးပေးပါဦးမှာ... ကျွန်တော်ကအကို့စာဖတ်ပိရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ...ကျွန်တော့်ဘလောက်မှာလဲ အကို့ကိုလင့်ထားပါတယ်
Nge Naing - 11/23/09, 10:08 AM
ပို့စ်မတင်တာ ကြာနေပြီ အသစ်လေးဘာလေး မတင်သေးဘူးလား။
ဟိုတွေးဒီတွေး စာစုများ - 11/24/09, 2:37 AM
တော်တော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာပါဗျာ။ မှတ်သားသွားပါတယ်။
Anonymous - 11/29/09, 1:39 AM
this family is so quiet for long.
ဟိုတွေးဒီတွေး စာစုများ - 12/1/09, 12:23 AM
ဟုတ်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကနေခဲ့ဖူး တဲ့ တောမြို့လေးဆို ကိုယ်ပိုင် တီဗီ ရှိတဲ့ အိမ်တောင် မရှိဘူးဗျ။ ရုံမှာပဲ သွားသွားကြည့်ရတာ။
sosegado - 12/9/09, 3:32 AM
sosegado - 12/31/09, 4:24 PM
Happy New Year အရာရာအောင်မြင်ပါစေ